Suuqyada Apple ayaa loo kordhiyay xirmooyinka xaqiiqda ee LEGO: Dhinac Qarsoon. | Wararka IPhone
Suuqyada Apple ayaa loo kordhiyay xirmooyinka xaqiiqda ee LEGO: Dhinac Qarsoon.
Toni Cortés | | iPad, iPhone, Ciyaaraha IPhone, dhowr
Apple waxay bilowday suuqgeynta taxanaha cusub ee Qalabka Lego Building loo yaqaan Dhinac qarsoon. Waxay si wada jir ah u naqshadeeyeen Cupertino iyo Danmark si ay u bixiyaan khibrad isku dhafan oo dhab ah.
Hidden Side waa taxane cusub oo noocyo LEGO ah taas oo ku dhisan "adduunyo cirfiid iyo curin abuur leh." Carruurta la siiyo qalab ay caruurtu ku ciyaaraan oo ay u keentay nolosha dhabta ah ee a iPhone ama iPad.
Ururinta cusub ee xirmooyinka LEGO waa waxaa jilaya Jack iyo Parker, laba wiil oo rooxaanta ka qabta meelo kala duwan oo magaalada ah. Waxay u eg tahay nooca 'Ghostbusters' ee LEGO.
Ururinta cusub ee LEGO, carruurtu way dhisi karaan tirooyinka iyo qurxinta ay leeyihiin si aan hadhow u aragno iyada oo loo marayo aaladda macruufka ah ee ciyaar is-dhexgal ah iyadoo la adeegsanayo tikniyoolajiyadda AR (Xaqiiqada Daabacday) Waxay abuuraan animations kala duwan 3D ku xiran xirmada. Iyada oo la dhigay Ninkii duurjoogta ahaa oo xannibmayTusaale ahaan, carruurtu waxay sahamiyaan doon quusaysa oo leh "sir qarsoon oo qarsoon," ka dibna ay galaan dagaal badmareenka.
Dhammaan noocyadu waxay leeyihiin isdhexgal gaar ah. Waxay leeyihiin dahsoon si ay u xalliyaan, waxyaabaha si aad u hesho, kulan kala duwan, cirfiid si ay u ururiyaan, iyo dagaal kabtan cirfiid a.
Sida noocyada soo jireenka ah ee shirkadda deenishka, dhammaan xirmooyinkaan isku imaatinku waxay la yimaadaan minifigures, xayawaan, iyo qalab kale si ay ugu habboonaadaan mowduuca taagan, iyo dhammaan qaybaha loo baahan yahay si loo abuuro goobta la doonayo.
Codsiga dhabta ah ee la kordhiyay sidoo kale si iskiis ah ayuu u shaqeeyaa. Uma baahnid inaad tilmaamto marxaladda LEGO markasta. Qaabkan waa inaad ku maareeysaa cirfiidyada la qabtay, adigoo dhaqaajinaya ciyaaro kale oo taxane ah oo cirfiidyadu kor u qaadayaan markaynu ka gudubno imtixaannada.
Barnaamijka. ee LEGO dhinac qarsoon Waa bilaash, waxaa loo heli karaa macruufka iyo Android, laakiin kaliya waxay ku habboon tahay qalabka taageera ARcore xaqiiqda la kordhiyay.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Barnaamijyada IPhone » Ciyaaraha IPhone » Suuqyada Apple ayaa loo kordhiyay xirmooyinka xaqiiqda ee LEGO: Dhinac Qarsoon.
Hadda waad joojin kartaa dhageysiga dhageysiga Alexa ee shaqaalaha Amazon
Galaxy Note 10 wuxuu sameyn doonaa bilaa maqalka madaxa laakiin wuxuu ku jiri doonaa adapter